Galaxy S20 horeyba wuxuu uguhelay si toos ah Google Duo | Androidsis
Muuqaal aad u xiiso badan oo Pixel ah oo leh Google Duo ayaa gaari doona Galaxy S20 kahor dhamaadka sanadka. Waxaan ka hadlaynaa iskudhafka otomaatigga ah taasna waxay noo oggolaaneysaa inaan wicitaanno fiidiyoow ah oo kamaraddu na raacno meel kasta oo aan u dhaqaaqno.
Es sidii oo aan haysanno kamarad na daba socota, inkasta oo leh xaddidaadda software-ka kamaradku ku dhajinayo zoom. Laakiin runta, ee lagu arkay fiidiyow, muuqaalkani waa mid aad u qabow in lagu haysto Galaxy S20 oo loo maleynayo inta kale ee dhamaadka Samsung.
Shaqadani waxay si toos ah u ilaalineysaa kaamirada iyadoo la socota isticmaaleha markay goobta ku sii socdaan. Taasi waa haddii aan ka dhaqaaqno kamaradda wicitaanka fiidiyoowga Google Duo waxay ku dabakhi doontaa saameynta dhaweyd qaabka jirkeena, haddii aan weyno, wey weynaaneysaa qaabka si had iyo jeer loo helo jir ku habboon
Una shaqeynaya sanadkii hore Google Pixel oo ah mid gaar ah ee Google Duo iyo in xitaa xaaqda kamaradda markii lagu dabaqo dhaweyd si saameyn loogu yeelo wax yar. Sidaan soo sheegnay, waxaa had iyo jeer ku xadidan barnaamijyada softiweerka iyo muraayadaha indhaha oo go'an.
Xilligan 'Fram auto' ama 'Automatic Fraraming' ayaa loo heli karaa Galaxy S20, Galaxy S20 + iyo Galaxy S20 Ultra +. Waa inaan fahanno in mar uun inta ka hartay dhamaadka-sare ee sumadda Kuuriya ay awood u yeelan doonto inay ku raaxeysato shaqadan oo hubaal in si ballaaran loogu isticmaali karo wicitaannadaas fiidiyow ee aan hadda la leenahay kuwa aan jecel nahay iyo saaxiibbadeen.
Hawl in marka uu firfircoon yahay waxay toos u aadeysaa kamaradda xagasha ballaadhan ee Galaxy-kan si aad u bilowdo adeegsiga inta kale kaamirooyinka sidii loogu baahnaa in loo weyneeyo. Hadda waa inaan sugnaa inta harsan si aan ugu helno Automatic Framing taleefannadeenna; ha moogaanin wararka ugu fiican ee One UI 2.5.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Galaxy S20 wuxuu helayaa Google Duo gaar ah oo toos ah oo loo yaqaan 'Pixel'
Sida loo aamusiyo xiriirada weligood WhatsApp Beta